Sawirro: Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo ku baxay xalinta banaan baxyadii rabshadaha watay - Jowhar Somali Leader
Home Somali Sawirro: Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo ku baxay xalinta banaan baxyadii rabshadaha watay
Sawirro: Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo ku baxay xalinta banaan baxyadii rabshadaha watay
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa ku baxay xalinta banaan bax ay dhigaayan dadweyne careysan oo ka gadoodsan askari ka tirsan ciidanka booliska oo xalay labo qof oo shacab ah ku dilay degmada Boondheere.
Guddoomiye Cumar Filish oo banaan baxayaasha kula hadlayay fagaaraha Daljirka Dahsoon ayaa ka dalbaday inay is dejiyaan, isagoo ka tacsiyadeeyay dhibkii dhacay, ayna dowladdu u xirtay askarigii dilka geystay oo xabsi ku jira.
“Waxaan marka hore idin kaga tacsiyadeynaya dhibkii dhacay oo ahaa mid aad u foolxun isla markaana qalbigeyga xanuujisay waana sababta keentay inaan hortiina imaado, sidoo kale madaxda dowlada wey xanuujisay waxeyna diyaar u yihiin in sida ugu dhaqsiyaha badan sharciga loo horkeeno gacan ku dhiiglihii falkaas arxandara ah geestay”ayuu yiri Guddoomiye Cumar Filish.
Sidoo kale Guddoomiyaha ayaa ka dalbaday qoysaska dadka laga dilay inay u yimaadaan, si iyagoo wadajir ah ay safka Maxkamadda u galaan, ayna goobjoog ka noqdaan Maxkamadeynta askariga dilka geystay.
Waxaa uu ugu baaqay shacabka inay is dejiyaan oo ay fowdada joojiyaan, isla markaana canshuurtii ay bixiyeen ee lagu dhisay laamiyaasha aysan burburin.
Guddoomiye Cumar Filish ayaa sheegay in dowladda ay go’aan ka soo saareyso bandowga, isla markaana ay haatan u fadhido sida uu hadalka u dhigay.
Dhinaca kale Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa taliska qeybta guud gobolka Banaadir ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed kula kulmay qoysaskii marxuumiinta, waxaana u sheegay in sharciga si deg deg ah loo horkeeni doono gacan ku dhiigle Xasan Aadan Xasan oo ah askarigii dilka geestay, sidoo kalena ay garab taagan tahay dowladda garab taagan tahay qoysaska marxuumiinta gardarada lagu dilay.